KPET DR6000 pụọ Pita anụmanụ digital radiography X ray Onyonyo DR usoro - China HD Medical Technology
Kpọọ Anyị: + 86-311-66575023
U ogwe aka DR digital X ray Onyonyo Radiography usoro
UC ogwe aka DR digital X ray Onyonyo radiography igwe usoro
Ewepụghị bed DR digital X ray Onyonyo radiography akụrụngwa usoro
Mobile DR digital X ray Onyonyo radiography ngwaọrụ usoro
Analọg X ray Imaging
UC ogwe aka DR digital X ray Onyonyo Radiography igwe ...
Ewepụghị bed DR digital X ray Onyonyo Radiography itinye ...
Mobile DR digital X ray Onyonyo Radiography ngwaọrụ s ...
KPET DR6000 pụọ Pita anụmanụ digital radiography X ray Onyonyo DR usoro
Standard imewe nke bed elu na a wider nso nke ngwa adabara inspections niile obere, ọkara na nnukwu ụmụ anụmanụ. The elu-tech mejupụtara ihe na-eji bed elu, na ihe nwere ọkọ na-eguzogide ihe onwunwe na bụ mfe ọcha. The onunu ogwu maka adọrọ X-ray bụ ala.
A ọgbọ ọhụrụ nke nnukwu size of digital ewepụghị panel detector enweghị splicing, na detector na nnukwu size of "17 × 17" amorphous sịlịkọn (pixel size: 127 μ m na image nnweta oge: 4 ~ 6 sekọnd) na-dị na mbụ nkwakọ ngwaahịa si Korea na ya enweta na-eduga na nkà na ụzụ ozo na ụwa dum. Ọ nwere elu kwụsie ike na mkpebi ruru na nwere atụmatụ nke elu-edu, ogologo ndụ, elu arụmọrụ na-eri ruru n'otu oge, si otú nzute adakarị were na gwakwara ndị na-enweghị ihe na-echegbu.
E nwere a isi image nhazi technology si HD Medical na akpaka window ukpụhọde, mkpọtụ Mbelata na akpaka nnyefe nwere ike nweta na image. The ike image nhazi ọrụ awade kacha mma mmetụta nke nkwalite, ihe nzacha, ma mkpọtụ Mbelata.
Nkwado Ọrụ List usoro:
Ọ nwere ọrụ maka image nnweta, na-abawanye na Mbelata image, ukpụhọde nke image ihie, ukpụhọde nke image iche, image adiana, image flips na VHS n'ihe; The workstation nwere ọrụ nke akpaka nche ndabere maka image, nke na-akwado ụdịdị nke otu ụzọ ma ọ bụ sọrọ ụzọ; The Dicom3.0 image nnyefe, ase, ndị mbipụta, na-ebi akwụkwọ nwere ike na-enweta site na nke a usoro. DR usoro nwere ike ijikwa onye ọrịa ahụ na image ozi;
Ewepụghị panel detector Japan Toshiba, 17 '17' amorphous Silicon (FPD) Cesium iodide 1 set
Ọrụ ebe: Nka na ụzụ ọkwa kọmputa, 2m HD ihuenyo 1 set
software software maka anụmanụ 1 set
Animal bed No.6 bed, panel nwere ike ime anọ direction tube kọlụm akpali elu na ala site na ọkụ eletrik 1 set
High voltaji generator 220V, 320MA, 32KW 40-150kv Mere na China (Neusoft ika) 1 PC
X ray tube Baịbụl hiwere isi n'ebe: 0.6 * 1.2 tube voltaji 40-150KV. Toshiba ika 1 PC
Laser film na ngwa nbipute Kodak 5700C 1 PC
Akwụkwọ akụkọ na ngwa nbipute yi 1 PC
Myọcha okporo dị JPI 1 WEPỤTARA
Ihuenyo mmetụ aka HD Medical 1 PC
Post-nhazi ọrụ ojii Computer na software 1 WEPỤTARA
Remote Trolley 3KW gbasie ntụ ntụ, pụrụ ịkpali na ala. 1 WEPỤTARA
Ngwá Ọrụ igbe HD Medical 1 WEPỤTARA
High voltaji cable 75KV 2PCS
Power cable Abụọ na-adọ 3wires 1 PC
Collimator Special maka Animal 24V 1 PC
Power ampilifaya: Emebere na china 1 WEPỤTARA
ndị ọzọ na- Mbukota katọn, ụwa waya 1 WEPỤTARA
Previous: KPET DR6500J pụọ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ Pita anụmanụ digital radiography X ray Onyonyo DR ngwaọrụ usoro
Next: KPET DR5500 Veterinary Pita anụmanụ digital radiography X ray Onyonyo ígwè usoro
analọg High Quality Veterinary X Ray Machine
Hot ere Veterinary Digital Radiography
Veterinary Diagnostic Imaging Isiokwu
Veterinary Ewepụghị Panel Detector
Veterinary Tabel N'ihi X-Ray
KPET DR6000J pụọ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ Pita anụmanụ digital ...
KPET DR4500 Veterinary Pita anụmanụ digital radio ...
KPET DR6500J pụọ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ Pita anụmanụ digital ...
KPET DR5500J Veterinary Pita anụmanụ digital radi ...
KPET DR5500 Veterinary Pita anụmanụ digital radio ...
KPET DR4500J Veterinary Pita anụmanụ digital radi ...
HD Medical e tọrọ ntọala na 2000, bụ a ọhụrụ elu-tech enterprise onye ọkachamara research & mmepe, mmepụta, ahịa na mgbe-sales ọrụ n'ihi na ọgwụ Onyonyo ngwá ngwaahịa.
Ekwentị: + 86-311-66575023